Onye isi ala Tanzania: Nke mbụ onye na -eme njem nlegharị anya na Africa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Onye isi ala Tanzania: Nke mbụ onye na -eme njem nlegharị anya na Africa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
N'ịkpọsa ikpughe njem nlegharị anya nke Tanzania n'ofe ụwa, Onye isi ala Tanzania Samia Suluhu Hassan na -agagharị na njem nlegharị anya nke ugwu, na -eduzi ogbunigwe nke ihe nkiri na isi na saịtị ndị mara mma.
A ga -ebido ihe nkiri a na United States mgbe emechara ya, na -ezubere n'ahịa ma gosipụta ebe nlegharị anya ndị njem nlegharị anya Tanzania gburugburu ụwa.
Onye isi ala Samia kwuru na ihe nkiri Royal Tour ga -egosipụta njem dị iche iche, itinye ego, nka na ebe nkiri dị na Tanzania.
Ndị na -eme egwuregwu na njem nlegharị anya na ile ọbịa na -enwe obi ụtọ.
Mgbe ebidochara akwụkwọ ihe nkiri Royal Tour na Spice Island nke Zanzibar na ngwụsị Ọgọstụ Onye isi ala Tanzania mere ụdị njem nlegharị anya njem nlegharị anya dị otú ahụ n'obodo Bagamoyo dị n'ụsọ Oké Osimiri India. Obodo njem nlegharị anya akụkọ ihe mere eme nke Bagamoyo dị kilomita 75 site na Dar es Salaam, isi obodo azụmahịa Tanzania.
N'oge gara aga obodo azụmahịa ohu, Bagamoyo bụ ebe mbata ndị ozi ala ọzọ nke Ndị Kraịst si Europe ihe dị ka afọ 150 gara aga, na -eme ka obere obodo akụkọ ihe mere eme a bụrụ ọnụ ụzọ nke okwukwe Ndị Kraịst na East Africa na Central Africa.
Na Maachị 4, 1868, ndị nna mmụọ nsọ Katọlik nyere ala ka ha wuo ụlọ ụka na ebe obibi ndị mọnk site n'aka ndị isi obodo Bagamoyo n'okpuru iwu nke Sultan nke Oman bụ onye na -achị Zanzibar.
E guzobere ozi Katọlik mbụ na East Africa na Bagamoyo mgbe mkparịta ụka gara nke ọma n'etiti ndị ozi ala ọzọ nke Ndị Kraịst oge mbụ na ndị nnọchi anya Sultan Said El-Majid, Sultan Barghash. Ndị isi abụọ a ma ama bụ ndị chịrị Tanzania ugbu a.
E hibere ebumnuche Bagamoyo na 1870 ka ọ nọrọ n'ụlọ ụmụaka anapụtara n'aka ịgba ohu mana emesịa gbasaa na ụlọ ụka Katọlik, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ nka na ọrụ ugbo.
Ìhè, igwefoto, eme ihe!
Edebere akwụkwọ ntuziaka Onye isi ala Samia Suluhu Hassan iji kwalite saịtị ndị njem nlegharị anya Tanzania na ndị na-ege ntị zuru ụwa ọnụ iji bulie mmata njem mgbe mmetụta nke oria ojoo COVID-19 bibisịrị akụ na ụba ụwa.
“Ihe m na -eme bụ ịkwalite obodo anyị Tanzania na mba ụwa. Anyị na -aga ebe nkiri ihe nkiri. Ndị ọchụnta ego nwere ike ga -ahụ ka Tanzania si dị, mpaghara itinye ego yana saịtị mmasị dị iche iche, ”Samia kwukwara.
Onye isi ala Tanzania na -eduzi ndị ọrụ ihe nkiri na Ngorongoro Conservation Area Authority (NCAA) na Serengeti National Park mgbe ha mekwara otu ihe ahụ n'Ugwu Kilimanjaro, ugwu kachasị elu na Africa.
Ma Ngorongoro na Serengeti bụ ogige ntụrụndụ anụ ọhịa na Tanzania na -adọta ọtụtụ puku ndị njem mpaghara na mba ụwa kwa afọ. A na-agụ ogige ntụrụndụ abụọ ndị a na-eleta anya dị ka ebe nlegharị anya kachasị na East Africa, ọkachasị site na ndị njem nlegharị anya anụ ọhịa.
Ekwuputara mpaghara nchekwa Ngorongoro dị ka saịtị UNESCO World Heritage na 1979 n'ihi ama ama ya na mmetụta ụwa niile na nchekwa na akụkọ ihe mere eme nke mmadụ dị ka ndị sayensị dị iche iche dere mgbe ndị ama ama gbasara mmadụ na Mary na Louis Leakey chọtara okpokoro isi nke Nwoke mbụ na Olduvai Gorge.
Isi ihe na -adọrọ mmasị na mpaghara nchekwa Ngorongoro bụ ihe ịtụnanya ụwa ama ama - Ngorongoro Crater. Nke a bụ nnukwu ugwu mgbawa na -adịghị agbawa agbawa nke na -adịghị agbawa agbawa n'etiti afọ 2 ruo 3 gara aga mgbe nnukwu ugwu mgbawa gbawara wee daa n'onwe ya. Oghere ahụ, nke bụ ebe ndị njem nlegharị anya ugbu a na ndọta maka ndị njem nlegharị anya nke ụwa, ka a na-ahụta dị ka ebe nsọ maka anụ ọhịa bi n'okpuru mgbidi ya dị elu 2000 nke na-ekewa ya na mpaghara nchekwa ndị ọzọ.
Ogige Ntụrụndụ Serengeti bụ onye ama ama maka itinye anụ ọhịa, nke kacha adọrọ mmasị bụ Nnukwu Mbugharị Wildebeest na mbara ọzara ya, na -ezipụ ihe karịrị nde wildebeest 2 n'ime ezumike eke na Maasai Mara. Ogige Ntụrụndụ Serengeti bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha ochie na Africa site na mkpokọta anụ ọhịa, ọkachasị nnukwu anụ mamịrị Afrịka.
Nnukwu Migration ahụ bụ nnukwu anụ ụlọ na-agbakọta site na wildebeest 2 ruo 3 nde, ịnyịnya ọhịa na mgbada na-agagharị na sekit elekere 800 site na gburugburu Serengeti na Maasai Mara na-achọ ebe ịta nri kachasị mma na ịnweta mmiri. Ọdụm na anụ ọhịa ndị ọzọ na -eso ndị na -ata anụ ndị a n'ime puku kwuru puku, agụ iyi nọ na Osimiri Mara na Grumeti na -echere ha ka ìgwè ehi na -eso kompas ha n'ime.
Ejiri ụlọ oriri na ọ touristụ touristụ ndị ọbịa nke oge a mepere emepe, Bagamoyo bụ paradaịs ezumike na-eto ngwa ngwa n'ụsọ Oké Osimiri India mgbe Zanzibar, Malindi na Lamu gachara.